Chii chinonzi kushambadza CTR uye kuti ungavandudza sei? | ECommerce nhau
Chii chinonzi kushambadza CTR uye kuti ungavandudza sei?
Jose Ignacio | | Analytics, CRM uye Big Data, Marketing
CTR ndicho chidimbu chinoenderana neshoko tinya-kuburikidza chiyero uye iyo yakashandurwa muchiSpanish yakaenzana nechiyero chekudzvanya mukushambadzira kwedigital. Iri izwi, saka, iro rakabatana zvakanyanya nebhizinesi pamapeji ewebhu ane kushambadzira kwerudzi rupi nerupi rwakaiswa. Uye iyo inogona kuve yakasimba kwazvo paramende yekuita zano rekuita kuti kudyara kubatsire mune ino chaiyo nzira yekutaurirana kwevashandisi.
Kumwe kwekukahadzika kwekuti kubaya kuburikidza nemutengo kunokwira ndeyekuti inoverengerwa sei kuti ive nepfungwa yekufungidzira nezve zvazvinoita kubhizinesi redu redhijitari. Mupfungwa iyi, iyo CTR inoyerwa kana kuverengerwa zvichibva pane zvinoonekwa kana kudzvanywa kwekushambadzira kana imwe fomati yekushambadzira. Kuburikidza neyakareruka mashandiro ayo akavakirwa pa paradzanisa huwandu hwekudzvanya icho kushambadzira chakanangiswa uye nhamba yenguva iyo yakaonekwa nevashandisi (zvinonzi zvinoratidzira). Uye uko huwandu hunobva mukushanda uku hunofanirwa kuwedzerwa ne100. Saka nenzira iyi, isu tine CTR chaiyo.
Iyo data inoshandiswa kune zvakawanda uye zvakasiyana zvinhu mune yedhijitari chikamu. Kunyangwe chikuru ndechekuongorora purofiti inogadzirwa neshambadziro. Kuve yakakosha paramende, zvese kune vaparidzi nemakambani ayo anotengesa kushambadzira kana kushambadzira kwedhijitari. Izvi zvinodaro nekuti zvinovatendera kuti vaongorore mishandirapamwe yavanogadzira mukati megore rose. Nekuti pano isu tinouya kuchinhu chekutanga cheiyi izwi uye izvo hazvisi zvimwe kunze kweizvozvo kuyera mhando yemhinduro kumushandirapamwe.
1 CTR: kuyerwa mumashambadziro ekushambadzira
2 Kugadzirisa iyo CTR mukushambadzira: maitiro ekuzviita?
3 Ongorora zviri kuitwa nemakwikwi
4 Mamwe matipi anobatsira kwazvo kugadzirisa CTR
CTR: kuyerwa mumashambadziro ekushambadzira
Imwe yezvinangwa zveinonzi tinya kuburikidza rate ndeyekuti farira kupindirana kwavo kuitira kuti pave nehutongi hunoshanda, zvese nevashambadzi nevaparidzi, mukutonga kwerutsigiro urwu mukushambadzira kwedigital. Kubva pane ino mamiriro ese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuita ichi chiyero kuri nyore kwazvo kuita.
Nepo kune rimwe divi, chishandiso chine simba kwavari kuti vafambe kuenda uko mushambadzi anoda kuenda navo. Semuenzaniso, kune rimwe rakasiyana peji rewebhu kana kunyangwe shanyira imwe landing peji kubva uko mushambadzi anogona kuunganidza data remushanyi, aine zvinangwa zvakatsanangurwa senge zvinotevera izvo zvatareva pazasi:
Tengesa chigadzirwa, sevhisi kana chinhu.
Varatidze zvimwe zvakadzama zvine chigadzirwa kana sevhisi.
Unganidza rumwe ruzivo kubva kune mumwe mutambi mukuita.
Chero nzira, inofanirwa kuve yakajeka kubva pakutanga kuti une akati wandei mazano anoshanda ekuvandudza CTR mukushambadzira. Uye ipapo ndipo panotsanangurwa tsananguro dzako kuti iwe ugone kubatsirwa neichi chiitiko chakanyanya.
Kugadzirisa iyo CTR mukushambadzira: maitiro ekuzviita?
Panguva ino chinangwa chedu chekutanga chinenge chiri chekuona chero zano rekusimudzira iyi data mukushambadzira uye izvo zvinoreva zvakawanda kwatiri mabhenefiti pane yedu webhusaiti kana chiitiko chehunyanzvi. Pamusoro peichi chinhu chakakosha tinokupa mamwe matipi ekuti ugadzirise kubva zvino zvichienda mberi:
Ongorora mazwi akakosha ekushandisa: mhinduro yedambudziko iri inogona kunge iri muchinhu chakareruka sekuona kuti ndeapi mazwi anozivikanwa nevashandisi kana angave anonakidza pane imwe nguva uye chiitiko. Kana chiito ichi chikaitwa nemazvo, hapana mubvunzo kuti kushambadza kubaya kunogona kuwedzera uye nenzira iyi tichava ne inonyanya kutariswa, inoonekwa uye pamusoro pese inobatsira webhusaiti.
Tora hanya newebhu peji dhizaini: iyi idiki diki iyo dzimwe nguva inoenda zvishoma isingacherechedzwe nevamabhizimusi mune yedhijitari chikamu. Dai iyi yaive kesi yako, mhinduro ichauya kubva kune chiito chakamanikidza sezvazviri kutsanangudza dhizaini zvinoenderana nemasevhisi aunopa. Ndokunge, kana uri aripo munzvimbo dzekudyidzana, kana iwe ukapa tsamba yemashoko kana ruzivo rwemashoko kana chero imwe mhando yerutsigiro kubata vatengi kana vashandisi.
Zvinyorwa zvemhando yepamusoro: Iko kukanganisa kukuru kuramba uchingofunga kuti mhando yezvirimo haina chero mhando yeanobatanidza neinodzvanya kuburikidza nezinga. Kana zvisiri, pane kudaro, ndiyo sosi yekupinda kwekushanya kwakawanda uye kuti kushambadzira kunoshanyirwa. Iwo mavara anofanirwa kuve anongwarira mune ese mativi uye kunyanya kuti iwo haana zvinyorwa zvakapetwa kana zvakanyorwa zvakaiswa zvinogona kukanganisa chiito ichi nevashandisi.
Kurudzira pfungwa kune iyo chikamu chevashandisi: zano rinoshanda kwazvo reaya makesi, kunyange hazvo uchikanganwawo, kukurudzira vashandisi kuzvikurudzira kuburikidza nezvaunovapa. Mupfungwa iyi, hapana chinhu chiri nani kunze kwekufona kuti uite chiito kuronga zvimwe zvinongedzo zvemitsara kana zvemukati. Kuti izvi zvive nenzira iyi, uchafanirwa kutsamwisa maitiro avo nenzira yezvinhu zvinopa pfungwa uye dhizaini zvinokurudzira imwe chikamu cheichi chiitiko.
Ongorora zviri kuitwa nemakwikwi
Sezvo iwe waona, isu takakupa iwe unoshanda kwazvo nhungamiro yehunhu kukurudzira kuti mafomati ekushambadza anoshanda kwazvo. Kusvikira pakuita kwevatengi ndizvo zvauri kuda kubva panguva yekutanga. Ndokunge, nekudzvanya zvakafanana kuenda kumafomati akakosha mukushambadzira kwedigital.
Asi iwe zvakare uchave nezvimwe zvishoma zvinozivikanwa, asi zvakaenzana zvinoshanda masisitimu kuzadzisa zvinangwa. Hatisi kutaura nezve chimwe chinhu uye hapana chakaderera pane icho iwe chaunosarudza kuita ongororo pane zviitwa zvemakwikwi. Sezvinei, kugona kwayo kusimudzira kuyerera kunobva mukushambadzira. Gamuchira zvinoitwa nevamwe uye shandisa zvinotevera zviito zvatinozotsanangudza pazasi:
Tarisa pamakwikwi, asi kunyanya avo vari mune yako indasitiri.
Dzidza zviito zvavanoita, ndeapi magadzirirwo avanazvo, kana vakawana mhinduro zhinji, nezvimwe.
Kana uchikwanisa, tarisa mhedzisiro yezviito zvavo uye kana zvichigutsa, unogona kuzvimisa kuti uzviise mukuita pane webhusaiti yako.
Unogona kutaurirana nevamwe vanhu vari mumamiriro akafanana neako nekuti unenge uri mukana wakasarudzika wekuteedzera mafambiro edhijitari.
Uine rombo rakanaka uye imwe fungidziro muresipi iwe ungazopedzisira wauya nemazano makuru ekuti sei kugadzirisa izvi mukati mekushambadzira kwedhijitari. Asi chero zvakadaro, mirira mazuva mashoma kana vhiki kuti uratidze kuti matanho ave anoshanda zvine mutsindo kuzadzisa zvinangwa zvako zvikuru.
Mamwe matipi anobatsira kwazvo kugadzirisa CTR
Zvinogona kunge kuti nezviyero zvakapfuura iwe usati wakwanisa kuwedzera kubaya pane kushambadzira. Kana zvirizvo, usazvidya moyo. Iwe unogona kuyedza nedzimwe nhungamiro dzechiito icho chiri chepakutanga, asi pasina kuregeredza chinangwa chauri kutsvaga.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti chinangwa ndechekuti mushandisi anyore pane yako kushambadzira. Uye kuti uikurudzire, unogona kunge usisina imwe sarudzo kunze kwekutaridza, semuenzaniso, chifananidzo chinoyemurwa nemushandisi, kuda kuziva kana kufarira kupinda. Kusvika pakuti zvinokwanisika kufunga izvo zvichawanikwa munguva idzodzo.
Isa zvinyorwa zvinokwezva uye zvinokwezva. Hapana mubvunzo kuti chikamu ichi chemashoko ane ruzivo ndicho chinhu chekutanga chinoonekwa nevaverengi. Sarudzo yekuenderera mberi kana kwete inoenderana nekutungamira musoro wenyaya. Tora hanya neichi chikamu zvishoma nekuti chinogona kukupa iwe yakawanda mufaro kubva ikozvino zvichienda mberi.
Kwete kurega kusamboita zviratidzo zvekuzivikanwa. Chimwe chinhu chinogona kudzora kuwedzera kweCTR ndechekuti iwe unokanganwa chimiro chebhizinesi rako kana webhusaiti. Zvese zvinhu zvinofanirwa kuve zvinopesana zvakanyanya uye pasina kukanganwa zvauri kutsvaga sekambani diki nepakati. Mupfungwa iyi, chokwadi chekuti kushambadza kwako hakuratidze zvigadzirwa zvinoratidza zvimwe nezve huzivi hwezvinhu zvemadhijitari zvinogona kukubatsira zvakanyanya.
Sarudza ku tsananguro izere pagoogle. Zvakare iyi injini yekutsvaga ine simba inogona kuve mhinduro kumatambudziko ako uye kupfuura zvaunofungidzira kubva pakutanga. Kune izvi, zvichave zvakanyanya kukosha kuti iwe ujekese zvinhu zvakajeka kune vashandisi nezve izvo zvavachawane. Edza nenzira dzose kugadzira chimwe chinhu chinovafadza kana kuratidza zvakanakira zvigadzirwa zvako kana masevhisi kuburikidza nekutenga kwavo. Ehezve, ichave iri dhijitari yekushambadzira zano risingazovhiringidza chero munhu.
Iwe unenge waratidza kuti kuburikidza nemamwe epakutanga uye kwete zvachose akaomesesa mazano iwe ekugutsa uku kudiwa. Icho hachisi chimwe kunze kwekuvandudza iyo yekudzvanya kuburikidza chiyero mubhizinesi rewebhu webhusaiti yako kubva zvino zvichienda mberi. Saka kuti nenzira iyi, iwe unobatsirwa kuburikidza nekuwedzera kwakakosha muhuwandu hwekutengesa uye izvo zviri shure kwezvose zvauri kutsvaga kuburikidza neiyi zano readhijitari. Uye pamusoro pedzimwe pfungwa dzekufunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Chii chinonzi kushambadza CTR uye kuti ungavandudza sei?
Kutengesa sei pa Instagram
Ndeapi hunyanzvi hunofanirwa kuve neCommerce Manager?